Ogbo Okpomoku Na-akpali: Mgbe inwere Obi Abụọ, Gaa Ogbi | Martech Zone
Mgbe ụfọdụ m hụrụ n'anya ahịa na-emepe ogologo oge azum na-agbanwe echiche nke a azụmahịa, dịkwuo n'ikuku nke a ika, ụgbọala ahịa na skyrocket a ụlọ ọrụ ịga nke ọma. Taa abụghị otu n’ime ha.
Uzo ahia ahia nke intaneti gbara oku na amamiihe atụmatụ nke Nwa nwoke ochie.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime mmadụ ole na ole anụbeghị, Old Spice guy na-arụsi ọrụ ike na-aza Tweets site na ọwa Youtube ya n’onwe ya. Ọ na-aza ndị na-eso ụzọ dị ukwuu ihe gbadara ndị nwere obere na-eso ụzọ (mana ọ kachasị usoro ndị a).
Ànyị bụ ndị na-emighị emi na ndị ogbi? Tụfuo nwoke mara mma nke nwere olu dị ukwuu na akwa nhicha wee nye ya ụfọdụ nlọghachi dị egwu ma ụwa na-ele ya anya dị ka ezigbo amamihe. Nke a ọ bụ nke izizi? Nke a abụghị naanị Gaa Daddy boob mkpọsa re-mepụtakwara? Ọ bụ n'ezie na dị ịtụnanya?
Chi jiri? Mmekọahụ na Obodo? Frog na Beer Azụmaahịa? Gaa Papa Boobs? Nwa Ochie? Ma eleghị anya, anyị niile ga-akwụsị ịnwa ịbụ ndị smart smart ma daa ya ntakịrị.
PS: Abụ m onye na-emighị emi na ogbi. M hụrụ azụmahịa ndị a n'anya ma abụ m onye ihu abụọ. Otú ọ dị, m ga-eguzo n'akụkụ eziokwu ahụ bụ na anwụbeghị m Old Spice ebe ọ bụ na m hụrụ papa m ka ọ nweta ya dị ka ihe nkwụnye ngwaahịa na 70's. Echeghị m na o jiri ya mee ihe. Ọ na-ajụ ajụjụ, “Mgbasa ozi a ọ na-ere karịa Old Spice?"
Tags: mkpọsa ngwá ahịaochie oseochie mkpọsaelekọta mmadụ media
Jul 15, 2010 na 7: 52 AM
Ahụrụ m mkpọsa a n'anya! Ị na-eso azụ-na-apụta n'etiti Old Spice Guy na Alyssa Milano? Alyssa ewepụtala nzaghachi vidiyo nke ya na-arịọ Old Spice Guy ka o ziga $100k na ego enyemaka mwụfu mmanụ mgbe o zipụrụ ya Roses iri na abụọ.
Azịza ya bụ na http://www.alyssa.com/
Jul 15, 2010 na 8: 14 AM
Ekwetara m kpamkpam na m hụrụ ya n'anya, Patric. Nke ahụ bụ isi okwu m, n'agbanyeghị. Anyị kwesịrị ịgbahapụ mkpọsa anyị ọkaibe na mgbasa ozi na ntapu wee dee ụfọdụ ahịrị ọchị wee nweta onye gosipụtara akpụkpọ ahụ iji mee ahịa anyị?
Jul 15, 2010 na 8: 20 AM
Ọfọn, m bụ nwoke doro anya na akpụkpọ ahụ anaghị eme m ihe ọ bụla. Kama nke ahụ, ọ bụ mkparịta ụka amamihe ha na-enye ya na otú o si ekwu ya na-eme m ihe ọchị. Ugbu a ụmụ nwanyị n'aka nke ọzọ nwere ike inwe echiche dị iche.
Ya mere, echeghị m na nke a bụ gbasara akpụkpọ ahụ. Ọ bụ maka inwe amamihe. Echere m na vidiyo Toyota "Swagger Wagon" bụ otu n'ime vidiyo kacha kee ihe na-atọ ụtọ (ahịa?) Ahụtụbeghị m. Ma ee, ọ na-eme ka m chọọ ịzụta Toyota Sienna.
Maka GoDaddy, n'ezie mkpesa akpụkpọ ahụ dị irè. Mana n'eziokwu, azụrụ m n'aka GoDaddy tupu mgbasa ozi ndị ahụ apụta, azụghịkwa m ọzọ n'ihi mgbasa ozi. Ọ bụrụ echi HostGator malitere igosi mgbasa ozi "akpụkpọ anụ" m ga-atụgharị ihe niile na ha naanị n'ihi mgbasa ozi. Agaghịkwa m azụta ngalaba ọzọ m site na ha.
Jul 15, 2010 na 8: 21 AM
N'ezie, ahịrịokwu ikpeazụ na HostGator kwesịrị ịbụ “Agaghị m agbanwe ihe niile n'aka ha…”
Jul 15, 2010 na 8: 32 AM
Otú ọ dị, nke ahụ bụ isi ihe m na-ekwu. Anyị kwesịrị ịhapụ mkpọsa anyị niile dị mgbagwoju anya na mgbasa ozi wee dee ụfọdụ ahịrị ọchị wee nweta mmadụ ka ọ gosi akpụkpọ ahụ ka ọ na-ere ahịa anyị?” - Doug, enweghị iwe mana ị na-apụ na nke a. Old Spice na-edogharị akara ha na ndị na-ege ntị na-eto eto nwere ụfọdụ ahịa okike. Ha na-eji ọtụtụ usoro mgbasa ozi, mbipụta, telivishọn, ịntanetị (YouTube), na mgbasa ozi ọha mmadụ iji ruo ndị na-ege ha ntị. Kedu otu, dịka onye na-ere ahịa, ị nwere ike isi kwuo na nke a abụghị ma ọ dịkarịa ala mmalite dị mma nke mgbasa ozi dị mma? Naanị n'ihi na ha enweghị mgbasa ozi ntapu apụtaghị na ọ dị njọ ahịa.
Jul 15, 2010 na 10: 10 AM
Echere m na 'nke a ọ ga-ererịrị Old Spice' bụ ajụjụ ọtụtụ mmadụ na-atụ ụjọ ịza ugbu a 🙂
Echere m na ọ ga-eme. Nke a niile dị mma maka ika ahụ. Echere m na ọtụtụ ga-eleba anya ọhụrụ na Old Spice naanị n'ihi na anyị na-eche maka ya ụbọchị 2 gara aga ozugbo… karịsịa ma ọ bụrụ na ha na-eji ahụ nwanyị na-esi ísì ụtọ.
Otú ọ dị, ika a ọ na-eme ihe ọ bụla ka m jikọọ mmetụta uche na ya? Ọ na-ewulite ntụkwasị obi? Ewezuga itinye aka, ọ bụghị n'ezie. Echere m na mkpọsa a bụ naanị otu akụkụ nke ihe na-abịa site na nke anyị kpọrọ mgbasa ozi n'ụzọ iwu.
Jul 15, 2010 na 10: 12 AM
Douglass, mkpọsa ahụ na-atọ ọchị. Ọ na-eme ka ndị mmadụ na-ekwu maka ika ahụ. Nke a na-eche echiche dị ka ihe naanị nna gị ma ọ bụ nna nna gị na-eji, bụ nzọụkwụ mbụ n'ime ka ndị mmadụ nwaa ya ọzọ. Ochie Spice agbanweela ọtụtụ ihe ebe ọ bụ na ọ bụ naanị inwe ntutu isi. Echere m na Old Spice na-aga karịa maka ọchị na ikwu okwu na-akpalite ala The Kasị Mma Guy na Ụwa, karịa ihe ọzọ dị ka Axe.
Enweghị m ike ikwenye gị na ntụnyere GoDaddy. N'ụzọ doro anya, GoDaddy na-eji mgbasa ozi ndị ahụ na-achọ ndị nwoke. Ọ bụrụ na Old Spice ga-eji Mkpesa Mmekọahụ ree, ha ga-eme ka ụmụ agbọghọ GoDaddy daa ya niile, dị ka Axe.
Ekwenyere m na ọtụtụ isi ihe Patric na-eme, na "Swagga Wagon" bụ nnukwu azụmahịa, na azụmahịa Monkey Trunk dị oke egwu. Echere m na Funny na-adị ogologo oge ma bụrụ ihe echefuru echefu.
Jul 15, 2010 na 10: 13 AM
M ga-ebu ụzọ kwuo na m hụkwara mkpọsa a n'anya. Ọ na-atọ ụtọ na ndị mmadụ na-achọ itinye aka. Kedu ihe ọzọ ha gaara arịọ.
Ugbu a, maka ajụjụ gị gbasara ma ọ na-ere Old Spice n'ezie, nke ahụ bụ arụmụka. Echere m na ọtụtụ ndị nwere otu echiche banyere gị na "nke ahụ bụ ihe papa m ji mee ihe n'afọ ndị 70" ma echere m na mkpọsa ahụ na-agbalị ịgbanwe onyinyo ahụ. Ọ na-agbalị ime ka ndị na-eto eto were ya dị ka ihe na-atọ ụtọ kama ịbụ otu maka papa m.
M mere n'ezie achọpụtara onye na m twitter iyi a ụtụtụ na-ekwu na mgbe ikiri camaign ha na-emeghe ka ika karịa na mbụ. Ọ pụtara na ha ga-azụta ya? Enwere ike. Nke ahụ ga-agbada n'otú isi ya si amasị ha, ma echere m na ọ nwere ọtụtụ ndị mmadụ ma ọ dịkarịa ala na-ele ihe ochie ochie na ụlọ ahịa ọgwụ karịa ka ọ dị na mbụ.
Sheldon, onye njikwa obodo maka Sysomos
Ugbu a, m nọ n'ịnyịnya!
Jul 15, 2010 na 10: 32 AM
Ọ bụrụ na ịgụbeghị ka esi enweta mgbasa ozi ndị a site na mgbasa ozi ọha ma mepụta ozugbo, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ nke ukwuu: http://www.readwriteweb.com/archives/how_old_spice_won_the_internet.php?
Vidiyo dị mma TV ewepụtara na-efe efe na nkezi nke nkeji 7 nke ọ bụla.
Jul 15, 2010 na 10: 39 AM
Ee, enwere m ogbi nke ọma iche na Old Spice dị mma ma ọ na-arụ ọrụ. N'iburu n'uche na ọtụtụ ndị mmadụ ka na-enwe oghere Old Spice dị ka akara ochie nke nwoke - ọ na-ajụ ajụjụ a - Ọ nwere nke ọ bụla n'ime akara ngosi mara mma, mgbasa ozi na mbipụta na-arụ ọrụ? M na-ekwe nkwa na ha dị oke ọnụ karịa mgbalị YouTube Old Spice.
Jul 15, 2010 na 10: 47 AM
Anọ m na gị, echere m na ọ na-atọ ụtọ, na-etinye aka na nke ọma, mana ọ ga-amasị m ịhụ mmetụta na ahịa tupu anyị niile kwupụta na ọ bụ ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi ọha na eze…
(M blọgụ gbasara ya ebe a: http://bit.ly/9SiQ3L)
Jul 15, 2010 na 10: 51 AM
Enyi m nwanyị bịara n'ụlọ n'abalị ụnyaahụ wee gwa m na ọ bulitere Old Spice wee nụ ísì ya na nke mbụ ụnyaahụ n'ihi vidiyo ndị ahụ. A tụgharịrị na ọ masịrị ya, ma chọọ ka m nwaa ya.
Ọ bụ ihe nlele nke otu, n'eziokwu, mana n'ime ihe nlele ahụ ọ na-arụ ọrụ. 🙂
Jul 15, 2010 na 10: 57 AM
Ha nwetara ihe ọtụtụ ụdị ga-amasị inwe ụbọchị ndị a (mgbasa ozi na-agbasa site n'aka ndị na-azụ ahịa), na Old Spice aghọwo 'dị jụụ' ọzọ. (Um… ọ dịtụla mma? Echere m na m nwere ike ịbụ nwata amakwaara nke ukwuu gbasara Old Spice..)
Maka m, ụdị mgbasa ozi a apụtaghị na ị 'tụkwasị obi' ika ahụ, dị ka n'ihe banyere GoDaddy (webụsaịtị Bochum bụ ihe chọrọ ọkwa ntụkwasị obi - ísì mmadụ; ọ bụghị nke ukwuu) mana ọ bụrụ na m hụrụ Ochie. Spice na shelf ụlọ ahịa ọgwụ, enwere m ike inye ya sniff ugbu a, naanị ịhụ ihe ọ na-esi n'ezie
Ogbi dị mma. Ogbi dị mfe ịbịaru nso; isi ihe. Ogbi bụ mgbapụ. Mana ị nweghị ike ịkpọ nke a ogbi. Ọ bụ amamihe, na ọ bụ mmekọahụ. Ngwakọta nke na-agaghị ekwe omume iguzogide. 😉
Ọ dị mma ịnụ echiche na-emegide, mana mkpọsa a dị nnọọ iche karịa mgbasa ozi GoDaddy Super Bowl. Ọ bụghị ntụnyere ziri ezi IMO. Ọ bụghị apụl ka apụl, ọ bụ apụl ka ribeye.
Naanị myirịta na mgbasa ozi GoDaddy bụ akụkụ "igosi akpụkpọ ahụ".
Ekwenyere m na nke ahụ bụ akpụkpọ anụ n'ihi akpụkpọ ahụ bụ ihe na-adịghị mma na ogbi ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe niile mana na nke a, a na-eji ya na mgbakwunye ejiji na-eme ka mgbasa ozi na-adọrọ adọrọ karị.
Ihe akaebe? Echeghị m na ọtụtụ ụmụ agbọghọ kesara ndị enyi ha na netwọkụ mgbasa ozi GoDaddy enweghị afọ ojuju. N'aka nke ọzọ, ọtụtụ ụmụ okorobịa na-ekekọrịta ma na-aga n'ihu na-ekesa mgbasa ozi Spice ochie, n'agbanyeghị na ha nwere nwoke na-enweghị uwe dị ka isi ihe a na-ahụ anya. Eziokwu ahụ bụ́ na ha dị njikere ime otú ahụ na-egosi na “akpụkpọ ahụ” abụghị ihe mere ha ji na-ekerịta ihe.
Mgbasa ozi GoDaddy bụ mgbasa ozi otu ụzọ ọdịnala, ọ bụ eziokwu? Enweghị nhazi ọ bụla na ọ nweghị ụzọ m ga-esi "imekọrịta" na Danica Patrick ozugbo. Otu ihe atụ gị ndị ọzọ. Ọbụlagodi na Old Spice guy azaghị otu onye jụrụ ya ajụjụ, olile anya na ọ ga-eme ya na eziokwu na ọ na-aza ọtụtụ ihe dị iche na GoDaddy, Twilight, Mmekọahụ na Obodo na frogs na mkpọsa biya. .
Ọ bụ njikọ aka na nhazi nkeonwe na-eme ka nke a dị iche. Onye ahịa maara ihe gwara m ozugbo na ahịa email niile kwesịrị ịbụ 1) tụrụ anya 2) nkeonwe na 3) dị mkpa. Ọtụtụ ụlọ ọrụ enweghị ike iji email mee ya na Old Spice jisiri ike mee ya na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Jul 15, 2010 na 10: 58 AM
Tupu izuụka gara aga, ekwetaghị m na ekwurula m okwu ndị a bụ 'Old Spice' ọ gwụla ma m na-ekwu okwu njakịrị na isi nke agadi nwoke. Agbanyeghị, mụ onwe m aṅụwo mkpọsa mgbasa ozi 'Old Spice' Kool-Aid. Ahụrụ m ya n'anya. Ọ na-etinye aka. Ọ na-eme ka m chọọ ịgba ọsọ na Twitter wee wepụta ihe aghụghọ n'ezie na-atụ anya na Old Spice Guy ga-emere m vidiyo naanị. O nwere ihe jikọrọ ya na agụụ mmekọahụ ya? Ee e. Ọ bụ echiche nke nwa oge ama (ee, m na-emighị emi), a n'ezie mma njikọ aka na a ika (ma m zụrụ ya ma ọ bụ) na ihe n'ezie fun ịkọrọ ndị enyi. Obi ụtọ a niile a tụgharịrị bụrụ ire m? Mba. Ma m ga-agwa gị na oge ọzọ m nọ na shelf, m ga-agbapụta n'elu otu n'ime ha nkwakọ ngwaahịa ọjọọ ụmụ nwoke na-a whiff. Enwere otu ihe mgbochi dị oke mkpa n'etiti nnukwu mkpọsa na m na-achụpụ ego n'ụlọ ahịa ọgwụ. Nke ahụ bụ ngwaahịa. Ọ bụrụ na ọ naghị esi ísì ọma, rụọ ọrụ nke ọma ma nye uru maka ego anaghị m eme azụmahịa ahụ. Ọ dị mma na Old Spice maka ịmanye m itinye akara ha na ntinye uche m.
Jul 15, 2010 na 11: 00 AM
– Mmata: Lelee
– Mkparịta ụka: Lelee
Nke a bụ ruo ọtụtụ mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ike ịga, mana nke a agaala n'ihu:
- Ntụle (lee ya na shelves wee mara ya, chee echiche banyere ya): Lelee
- Ịzụta otu: Lelee
Enwere m ike ịhụ gf m (ọ bụrụ na ọ nọ na Canada) na-akwụsị, na-esi isi ma na-achọ ịnwale ya na m n'ihi ihe ndị a. Ọ nwere ike ibugharị otu ịzụrụ n'ime 1/20 nke ndị na-ekiri ya, mana n'oge ahụ ọ bụ ọrụ ngwaahịa ịkwanye ịzụrụ ihe ugboro ugboro.
Ọ bụ mmeri na akwụkwọ m, nke bụ n'ezie ụdị siri ike ikwu n'ihi na ọ na-emighị emi. Egburu nke ọma, na-atọ ọchị na-atọ ọchị, agbakwunyere n'ụzọ anwansi n'ime mgbasa ozi ọha mana ọ ka na-emighị emi. Na ahụrụ m ya n'anya.
Jul 15, 2010 na 11: 11 AM
Echiche nke mgbasa ozi ndị a bụ:
1. Mmụba mmata. Emechaala.
2. Malite mkparịta ụka. Emechaala.
3. Mee ka ndị mmadụ na-ahụ Old Spice na shelves. Emechaala (gụọ nkọwa ndị dị n'elu m).
4. Nweta ndị mmadụ ịzụta ngwaahịa. Ọzọ, emela ya. O doro anya na ọnụọgụ ahụ ka na-abata mana achọpụtala m na ndị enyi m na-anwale ya n'agbanyeghị na nna ha na-eji ya eme ihe n'oge.
Mana agaghị m aga n'ihu ịkpọ ya akụkọ ịga nke ọma na mgbasa ozi ọha. Ọ na-eme nke ọma n'ịkwalite mmata ika? Helz ee. N'ezie, enwere m ọnụ ọgụgụ na-agba ọsọ na onye ga-emeri ọgụ n'etiti Old Spice guy na Dos Equis guy (na-eche na Chuck Norris adịghị n'ihi na anyị niile maara na ọ ga-emeri) ma ruo mgbe m ga-ahụ ọnụọgụ na ahịa nke ndị ahịa. ngwaahịa dị ugbu a ọ na-eji dị ka mgbasa ozi mmata .:) Ajụjụ bụ ị nwere ike hụrụ n'anya ma na-akpali ngwaahịa?
Ị nwere ike ịhụ onye Dos Equis n'anya, mana ị hụrụ biya Dos Equis n'anya? Ị zụtara ya otu ugboro ka mgbasa ozi ole na ole mbụ gasịrị? Ị gara n'ihu ịzụrụ ya ma emechaa? Ọ bụrụ na enwere nkwụsị n'etiti ika na ngwaahịa, ị ga-enweta naanị ịzụrụ otu oge nke na-abụghị ebumnuche njedebe. Ịchọrọ ịmepụta iguzosi ike n'ezi ihe - n'agbanyeghị ka okwu(s) si adọrọ adọrọ.
Chere na anọghị m n'isi?
Kpọọ m mana dọọ aka na ntị: Abụ m onye hụrụ n'anya abụghị onye agha mana abụkwa m onye ọgụ, yabụ enwetala echiche ọ bụla.
Ugbua lee nwanyi gi, ugbua lekwam. Anọ m n'ịnyịnya.
Jul 15, 2010 na 11: 14 AM
N'abalị nke ọzọ na-aga n'okporo ámá nke ụlọ ahịa nri m wee gafee Old Spice. Ọ bụrụ na enweghị m nke ọma na ụlọ mposi m ga-azụrụ ya ka m nwaa ya. Mgbasa ozi a na-ebuli ya elu n'uche yana ihe akaebe na-adịghị mma ga-egosi na ọ na-ere ere ma ọ bụ abụọ.
Ihe na-amasị m maka mkpọsa ahụ bụ na ọ ghọtara ọdịdị dị egwu nke omenala ịntanetị. Ọ bụghị naanị na ndị otu a na-egbu, ha na-ege ntị ma na-aza. Mkparịta ụka ya na Alyssa Milano, ruo na iziga Roses n'ụlọ ya. Nnyefe nke aro alụmdi na nwunye. Azịza ya ozugbo nye onye na-enweghị nnukwu ndị na-eso ya bụ onye na-akwa emo Old Spice Man naanị na-agwa ndị ama ama ama okwu. Nbufe nke ụda ụda ka obodo reddit nwee ike ịmepụta http://oldspicevoicemail.com
Nke a ọ bụ nka dị elu? Mba. Ma mgbe ahụ, ire ncha ọ̀ dịtụla elu nka?
Enwere m mmasị n'ezie ịmụta ụdị nsonaazụ P&G ga-ahụ na mkpọsa ahụ ma ọ ga-amasị m ịmụta ka mgbasa ozi mgbasa ozi a na-adịbeghị anya si atụnyere mgbasa ozi super-bowl mbụ, ma n'ihe mmetụta yana n'ihe gbasara ahịa.
Ngosi World Blog
Jul 15, 2010 na 11: 18 AM
Ị maara ka ị si mara na nke a bụ nnukwu mkpọsa mmeri?
N'ihi mmeghachi omume ọ natara. Ị ziri ezi na nyocha gị mana na njedebe nke ụbọchị mgbasa ozi dị ka nka. Ọ bụrụ na ndị mmadụ na-eche na ọ dị mma, mgbe ahụ ọ dị mma n'agbanyeghị ịbụ ndị na-emighị emeri, ndị na-adịghị mma, ndị mara mma, ndị na-agba ọsọ, ike gwụrụ, ndị ngwọrọ, ihe ọ bụla. Ihe ọchị bụ ihe ọchị, ọ dị mma na nsonaazụ bụ ihe dị mkpa.
Ọtụtụ folks n'okpuru na-ama na-agba akaebe na ndị mmadụ na-ama na-atụle, na-agbalị na ịzụrụ ngwaahịa na ọ dịghị onye n'okpuru 60 zụrụ maka 20 afọ.
Ụmụ okorobịa ndị a kpaliri ụfọdụ ndị na-ahụ maka mgbasa ozi ọha na eze nwere ahụmahụ na ndị na-akparị mmadụ ka ha wụba n'ụgbọ mmiri ma kwalite mkpọsa ha ma nye ya ezigbo nkwenye n'okporo ámá. Ihe ụdị ụdị dị ole na ole na-eme.
Nke ahụ bụ ịgba ọsọ ụlọ!
Jul 15, 2010 na 11: 22 AM
Amaara m na m na-eji ihe ochie eme ihe ugbu a nakwa na m malitere ịzụrụ ha n'oge a ma ama 'Ana m ịnyịnya' a ma ama. Nke ahụ ọ bụ naanị ekele maka mgbasa ozi ahụ? O doghi m anya.
Ma anyị nwere ike ịlele azụmahịa ọhụrụ na mkpọsa a ma ọ bụ na ọ bụghị m, ọ bụghị nsonaazụ kacha mkpa. Echere m na, dị ka Jeremy Wright na-egosi na nkọwa ya, na mkparịta ụka kwesịrị ka a na-ewere a kwesịrị ekwesị metric n'ihi na nti mkparịta ụka na-akọwapụta ahụmahụ ika na otú ọ na-positioned na ọha. Mgbasa ozi ọha na eze bụ ụzọ dị mma isi kwe ka ndị na-azụ ahịa na-emetụta akara, nke na-enye ya ohere ịmegharịkwu onye zụrụ ya. A na m eche na Old Spice abanyela n'echiche yiri nke ahụ ebe ndị ahịa na-eche 'akụkụ nke otu' dị ka a pụrụ isi kwuo ya.
Jul 15, 2010 na 11: 29 AM
Ikwenye na Clay n'okpuru… GoDaddy ada n'ihi na ọ na-enye ọ dịghị ihe remotely ụtọ, enweghị obi, na ya maara ihe … egosi ara na 2010 dị irè dị ka Hollywood 'Blockbuster' nke nwere ọmarịcha 'mmetụta pụrụ iche' ma ọ dịghị akụkọ ... Jurassic Park mebiri na ebu (ma nwee akụkọ na-adọrọ adọrọ nke ga-ebu ụbọchị ahụ)… mana ị chetara, na amaghị m ihe nrụpụta 'Godzilla'… ihe nkiri Matthew Broderick na-achọ n'ezie na ọ nweghị mgbe ọ bụla, mgbe ọ bụla, ọbụlagodi nụ… maka ihere Matiu.
Mgbasa ozi GoDaddy = ihe jọgburu onwe ya nke Godzilla … Ochie Spice = mmalite ihe nkiri ọhụrụ (naanị ịkụ nzọ ọ siri ike, ahụbeghị ya)… mana ngwakọta nke ọmarịcha anya na akụkọ dị ịtụnanya iji jide ndị na-ege ntị aka ntụrụndụ.
N'okwu a, mgbasa ozi Ochie Spice na-atọ ọchị na usoro na ụzọ ha si ejikọta ndị mmadụ n'otu n'otu bụ n'ezie 'amamiihe'… ọ dị mma, oge.
Julaị 15, 2010, elekere 12:17 nke ehihie
Ndo Chris! Echeghị m na @GuyKawasaki na @AlyssaMilano abụghị ndị na-ege ntị 'nwata'. N'otu aka ahụ, mgbasa ozi ọha mmadụ abụghị ndị na-ege ntị 'na-eto eto'. Usoro na-egosi na n'etiti afọ 30 na karịa nwere ọnụego nnabata ngwa ngwa na mgbasa ozi ọha. Nke a bụ egwuregwu viral dị ọcha… na-atụ aka na ndị mmadụ na ntanetị nwere nnukwu ndị na-ege ntị, weghara uche ha (na EGO ha) wee mee ihe na-eme ka ha na-ekwu maka Old Spice.
Asịghị m na ọ bụ ire ahịa na-adịghị mma, ọ na-achọsi m ike ma ọ bụrụ na ọ bụ ahịa ga-arụ ọrụ n'ezie.
Julaị 15, 2010, elekere 12:31 nke ehihie
Ummm… Ana m eyi ose ochie. Aghọtaghị m na m na-adịchaghị mma.
Julaị 15, 2010, elekere 12:33 nke ehihie
Nyocha gị nke Old Spice stunt = Ụgha.
Vidiyo Old Spice mara mma ọ bụghị bc nke ihe ọ bụla na ihuenyo, mana bc ihe ọ na-ekwu dị egwu. Eji m n’aka na ọ bụ ihe abụọ: (a) ọ na-agwa anyị okwu na (b) ihe ọ na-ekwu bụ amamihe. Ọnụ ọgụgụ nke ihe ọmụma agbasasị nke ha wetara na nzaghachi ha dị ntakịrị bụ nke dị nkenke ma na-akpasu iwe. Ha maara nke ọma ihe ha ga-ekwu, na oge & n'oge nke nzaghachi ndị ahụ bụ ihe masịrị anyị. Amara anyị ahụmihe emechuru mmadụ, nke amaghị aha mgbe anyị na-achọgharị na webụ, na a na-eji aka mepere emepe anabata mbọ ọ bụla ịkọrọ Joe Everyman okwu (ya bụ imebi otuto ahụ). Kedu ihe kpatara ndị na-agba ọkụ ọkụ ji ewu ewu ugbu a? N'ihi kpọmkwem otu ihe kpatara ya (ma metụtara anyị inane ahụmahụ n'ime polis). Ọ fọrọ nke nta ka ọ dị obere ka a na-atụ anya ya na ịntanetị ebe ọ bụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdịdị nke abụọ ịla n'iyi. Old Spice mere ka enwere ike ịgwa ya okwu n'ụzọ pụtara ìhè, ma ọ bụrụ na anyị sonye, ​​anyị chọrọ isonye na Joe Everyman Ya mere ee.
Julaị 15, 2010, elekere 12:53 nke ehihie
Ị na-agba ịnyịnya?
Julaị 15, 2010, elekere 12:59 nke ehihie
Ana m eji ngwaahịa ịsa ahụ ochie Spice. Enweghị deodorant ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Ngwaahịa ịsa ahụ ha dị mma n'ezie. Ọ tụrụ m n'anya mgbe mkpọsa ndị a malitere n'ebe ahụ.
Julaị 15, 2010, elekere 1:01 nke ehihie
Ha tọrọ nna m, yabụ ee ndị na-ege ntị tọrọ! 🙂 Ha nwere ntụpọ TV na-agbagharị n'ihu akụkụ mgbasa ozi ọha… ọ ka bụ mbọ ịre ahịa ọtụtụ ọwa na-egosi na ọ bụ akụkụ nke mkpọsa ka ukwuu. Ihe akaebe na-adị na # s mgbe niile, yabụ anyị ga-echere wee hụ ma ọ na-arụ ọrụ. Ugbu a ọ ga-apụta na ọ na-arụ ọrụ… o mere ka ị dee banyere ya… na ịmara na ị bụ onye na-ere ahịa mara ihe n'onwe gị, echere m na ị maara na post a ga-enweta ọtụtụ mkparịta ụka na jikọta ihe ọṅụṅụ 🙂
Julaị 15, 2010, elekere 1:05 nke ehihie
Nick, otú ahụ ka m dịkwa. Ma m ka ga-adị ka nwoke ahụ na mgbasa ozi ndị a!
Julaị 15, 2010, elekere 1:21 nke ehihie
Ego ịkwọ ụgbọala ọ bụ ihe na-akọwapụta ma mkpọsa a bụ ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi ọha ma ọ bụ na ọ bụghị? Enwere m ike ịrịọ ka m dị iche n'ihi na ọ ga-adị m ka 26 kwuru na akụkọ gị naanị, ọtụtụ nde (ọtụtụ nde ma eleghị anya) tweet na mmekọrịta ndị ọzọ na-elekọta mmadụ na-arụtụ aka na akụkọ ọganihu mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụghị a kpọmkwem ahịa na-abawanye, ọ na-esiri ike ikwu na mmụba nke ika mmata na mmeghe na a ọhụrụ ahịa enweghị uru na-enye a ikpo okwu maka ọzọ mgbalị.
Julaị 15, 2010, elekere 1:24 nke ehihie
'Ụfọdụ ịzụrụ' ma ọ bụ ọbụna mmụba n'ịzụta ka nwere ike ọ gaghị enwe nlọghachi na ntinye ego dị mkpa iji gosi ọganihu na mkpọsa dị otú a.
Julaị 15, 2010, elekere 1:25 nke ehihie
Aga m nzọ ya na-ere ihe ochie Spice – n'ihi na ọ na-eke mmata otú oge ọzọ ị na-na ụlọ ahịa ị ga-achọpụta na Old Spice nke taa abụghị otu Old Spice gị papa na-eyi na 1970. Ha na-agbasawanye ahịrị ha nke ukwuu ma ụfọdụ n'ime ihe ọhụrụ ahụ mara mma nke ukwuu.
Julaị 15, 2010, elekere 1:39 nke ehihie
Mana ọbụlagodi akara ma ọ bụ mmata' ebumnuche kacha bụ ire ahịa.
Julaị 15, 2010, elekere 1:42 nke ehihie
Anyi n'aka ochie ndi noro nwa oge ahuwo otutu mkpọsa dika nke a bia na-aga. Anyị ahụla ka onye ọ bụla si n'elu ụlọ na-eti mkpu na mkpọsa mara mma, naanị ịhụ ọnụ ahịa ngwaahịa na ahịa ka na-ada ma emechaa. Ọ bụ ya mere m ji na-akatọ mkpọsa a. M hụrụ ya n'anya n'onwe m na-eju na ole mkpọtụ m na-anụ… ma m nnọọ na-eche ma ọ bụrụ na ogologo oge mmetụta ga-e.
Julaị 15, 2010, elekere 1:43 nke ehihie
Ekwekọrịtara na isi ihe niile… belụsọ ajụjụ ma ọ bụ ndoputa gbasara ma mkpọsa a ọ gara nke ọma ma ọ bụ na ọ bụghị.
Slam dunk, maka ụlọ ọrụ ọ bụla, bụ inwe ahịa dị ịtụnanya NA ngwaahịa dị ịtụnanya. Enweghị m obi abụọ ọ bụla mkpọsa a ga-eme ka ndị mmadụ zuo… ma ọ bụrụ na ngwaahịa ndị ahụ “na-esi ísì” ( pun purpose 😛 ), mgbe ahụ ị nweghị ike ịta ahịa ahịa.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ekwenyere m ebumnobi mkpọsa - maka Old Spice ma ọ bụ Dos Equis - bụ 'Gbalịa ngwaahịa m'… ọ bụghị 'Bụrụ onye na-akwado ogologo ndụ maka ngwaahịa m'. N'akụkụ ahụ, mkpọsa Old Spice a na-aga nke ọma n'ọhịa!
Julaị 15, 2010, elekere 2:28 nke ehihie
N'ezie mana nke ahụ ọ bụ ebumnuche maka mgbalị a? O doro anya na ha na-anwa ihe ọhụrụ, na-agbalị ime ka Old Spice ika ume ọhụrụ ma mee ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ mmasị na ọgbọ na-eto eto. N'ikpeazụ nke a ga-eduga n'ịre ahịa mana ọ bụ ihe mgbaru ọsọ maka mgbalị a ka ọ bụ ihe mgbaru ọsọ ahụ bụ ihe gbasara mmata na re-branding ngwaahịa nke a ghọtara dị ka ngwaahịa ochie? Ugbu a, ha nwere nnukwu ikpo okwu nke ha ga-esi na-aga n'ihu ma kwalite ngwaahịa ahụ na ego ịkwọ ụgbọala n'uche. Nke ahụ ọ́ bụghị ihe ịga nke ọma? Ọ bụ na ọ bụghị soshal midia mere nke ahụ?
Jul 16, 2010 na 5: 09 AM
gbadaa ya? Ee. Ma ọ bụghị ya, ọ gaghị aga viral. Nke a bụ ọnọdụ n'ezie n'ụwa. N'ihi na Old Spice bidoro mgbasa ozi nje ha iji kpalite mkparịta ụka na-abụghị mgbasa ozi dị ka nke a, ọtụtụ ụmụ okorobịa m maara nọ ebe a na-achọsi ike ka ngwaahịa ha si dị mma. Ugbu a ọ dị m mkpa ka m lelee ngalaba Old Spice nke shelf oge ọzọ m ga-aga ụlọ ahịa ahụ. Ha meriri ndị ahịa ọhụrụ.
Jul 16, 2010 na 5: 11 AM
Ekwenyere m na Adam, ezigbo akụkọ ihe ịga nke ọma dị na ụlọ ọrụ mgbasa ozi rebranding dị ka Dominoes na Old Spice na-enwe ike ịdọrọ site na nke ahụ na-emepụta mkpọtụ dị mkpa maka ndị mmadụ itinye aka na nyocha - mgbe ahụ ha na-atụ anya ịgbanwe echiche ha maka ngwaahịa ahụ. Ee, ọtụtụ ọrụ na nyiwe mgbasa ozi ọha na eze site na nnukwu azụmahịa siri ike tụọ ya na mgbanwe ego ha nwetara ozugbo, mana uru na-ewepụta mkparịta ụka na-etinye aka n'ezie buru ibu.
Jul 16, 2010 na 11: 58 AM
Ọ bụrụ na ọ dị ogbi ma dịkwa mfe, gịnị kpatara na ị naghị eme ya karịa? Ebe ndị ahụ na-egbuke egbuke n'ihi na ndị mmadụ na-ekwu maka Old Spice. Oge. Ebe mkpu.
Isi okwu gị bara uru mana ọ nweghị mkpa. Ọ na-ere ahịa & ọ na-ama ama na ọ bụ ogbi. BTW, echere m na onye nlọghachi na mgbasa ozi Old Spice dị ntakịrị karịa GoDaddy.
Julaị 16, 2010, elekere 1:54 nke ehihie
Kedu ihe ụtọ njikọ juice? 😛
Julaị 17, 2010, elekere 2:51 nke ehihie
Ụmụnne, ị na-efu ihe dị mkpa ahịa akụkụ… Nke a mkpọsa na-adịghị ezubere iche maka ụmụ nwoke…Ọ ezubere iche maka ụmụ nwanyị. Anyị na-azụta ihe ahụ maka ndị di anyị, na ndị enyi nwoke. Mgbasa ozi a na-amasịkwa anyị.. :*
Jul 26, 2010 na 9: 49 AM
Ọfọn… ire ere adaala: http://mkt.gs/dz3AJD
Jul 26, 2010 na 11: 34 AM
Ee, mkpọsa a na-ere ngwaahịa ochie Spice ọzọ.
Dị ka Neilson Co. Sales dị elu site na 11% n'ime izu 52, na n'ime ọnwa atọ gara aga, ahịa wụsara pasent 55 na n'ime ọnwa gara aga, ha bilitere 107 pasent. http://bit.ly/brandweek-old-spice (Brandweek Julaị 25, 2010)
Ahịa maka mpaghara uhie kụrụ $1.6 nde maka oge izu anọ kwụsịrị July 11, 49 pasent na-awụlikwa elu n'ime oge izu anọ kwụsịrị Feb. 21, data SymphonyIRI na-egosi. Ngwaahịa anọ nke Old Spice Body Wash na-egosikwa ebuli. N'ozuzu ahịa maka Old Spice Body Wash bilitere 105 pasent maka oge ahụ
Ọ bụrụ na ọnụọgụ ndị a ziri ezi, ọ dị m ka ihe ịga nke ọma dị ịtụnanya.
Tupu 2010 "Old Spice = Old Man Gross!"
Biputere 2010 "Old Spice = Nwoke nọ n'ịnyịnya onye ọ bụla na-ekwu maka ya ma na-ekerịta site na netwọkụ mmekọrịta"